FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PAPITESE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Papitese
Alika mitambatra Papillon / Maltese mifangaro
Shayla the Papitese (alika papillon / Maltese mix dog) feno tamin'ny 1 taona— 'Maltese purebred ny rainy ary Papillion madio ny reniny.'
Ny alika Papitese dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny lolo ary ny Maltais . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Fahita tokoa ny fiompiana bararata lakroa misy taranaka maro .
Registra ny endrika mpamorona = Papitese
Mpanoratra International Canine Registry®= Papitese
Gracie the Papitese toy ny alika kely amin'ny 5 volana— 'Gracie no namana mamy indrindra hatramin'izay. Na izany aza, indraindray dia mety ho firavaka kely izy. Izy mitaky fotoana filalaovana sasantsasany avy amin'ny tompony sy saka tsy sahy. Mamiratra ny toetrany ary velomina be. Tiany tanteraka ny olona rehetra ary saro-kenatra kely fotsiny amin'ny alika lehibe. Tsy dia mivoraka loatra izy, fa hampahafantatra amin'ny tompony raha misy olona eo am-baravarana na raha mandre zavatra mampiahiahy izy. Maizina ny volony tamin'izy mbola kely ary fotsy kokoa rehefa nihalehibe izy. Mandeha any amin'ny mpanafika izy isaky ny 6 herinandro. Raha lava kokoa ny volony dia mila borosina izy satria afaka matotra. Tamin'ny taona iray taonany dia nanapa-kevitra ny hijanona ihany ny sofiny. Na izany aza, mipoitra tsindraindray izy ireo, izay manampy ny toetrany fotsiny. Hendry izy, nefa mety ho kely mafy loha . Fanofanana poti naka fotoana kelikely. Mitomany ny masony ka mampiasa Angel Eyes izahay mba hitazomana ny tarehy tsy hadio. Mpanoroka / milelaka izy ary toa tsy azontsika atao ny manapaka azy amin'izany. Amin'ny ankapobeny dia tianay fotsiny izy ary anisan'ny fianakaviana izy! Ny rainy dia Papitese ary ny reniny dia AKC Maltat feno ra. '
Tsy mifanaraka amin'ny alika kely Papitese amin'ny 12 herinandro— 'Nahita ny zanako kely tamin'ny dokambarotra iray aho. Vehivavy tsy afaka mitazona azy. Nijery indray ny sariny aho ary fantatro fa ahy izy! Izy no hanao ny alika fitsaboana tonga lafatra indray andro any, azoko lazaina fotsiny. Hatramin'ny nitondrany azy nody dia mora be ny nampiofana azy. Miaraka amin'ny alika 2 hafa sy ny ankizy rehetra eo amin'ny manodidina izy. Ny saka aza tiany. Tiany ny milalao, na dia mbola eo am-pikarohana ny mitsofoka . Amin'ny kilasy puppy dia iray amin'ireo mpianatra ambony izy. Tiako be izy! Na dia eo am-pofoako aza izy tia ahy, tsy fantany akory hoe malemilemy izy ary ho toy ny ahoana ny fomba tsara ho an'ny hafa marobe. Fantatro fa hanisy fiovana izy. :) '
Ampiasao ny Papitese puppy amin'ny faha-4 volana— 'Zazalahy kely io zazalahy kely io! Tena malina izy ary azo antoka fa mifanaraka amin'ny volony amin'ny alika am-pofoany, nefa mety ho mavitrika sy milalao koa izy! Mahafinaritra azy ny miaraka amin'ny ankizy sy ny biby hafa. Tena mahavariana ahy ny toetrany! Hendry izy ary mora hampiofana. Toa efa nampiofanina vilany izy tamin'ny fotoana nitondrantsika azy nody. Tena nifanaraka tamin'ny antsika izy Lab mainty SY Golden Retriever ! '
'Diamond ity. Papitese 1 taona izy. Izy dia tovovavy tena manan-tsaina sy mamy. Tiany ny mianika ambonin'ny fefy rehefa izy sakaiza saka dia any an-kafa. '
Shayla the Papitese (Papillon / Maltese mix) miaraka amin'ireo mpiray tanindrazana aminy dia 3 herinandro (aseho eo ambony efa lehibe)
Shayla the Papitese (Papillon / Maltese mix) puppy amin'ny 4 herinandro (aseho etsy ambony efa lehibe)
Bentley the Maltillon lahy (fantatra koa amin'ny anarana hoe Papitese) alika kely 5 volana sy 4,5 pounds - AKC Maltese ny reniny ary Papcon AKC ny rainy. Bentley dia avy amin'ny fako mitovy amin'i Mollie, aseho etsy ambany.
Mollie the Maltillon vavy (fantatra koa amin'ny anarana hoe Papitese) alika 5 volana sy 4,5 pounds - AKC Maltese ny reniny ary Papcon AKC ny raim-pianakaviana. Mollie dia avy amin'ny fako mitovy amin'i Bentley, aseho etsy ambony.
Sophie ilay Papitese 6 herinandro ... na Maltillon, nantsoin'ny mpiompy alika kely (Papillon / Maltese mix)
Lisitry ny alika miteraka Papillon mifangaro
sary an'ny mpanjaka corso ny alika
pitbull zazakely mainty sy fotsy
Inona no ick mitovy
dachshund chihuahua mifangaro efa lehibe
amerikana staffordshire terrier frantsay bulldog mix
zanak'alika sinoa toy hina